Kudzidza ballet kunokanganisa sei muviri wako? - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Nhau dzekambani > Kudzidza ballet kunokanganisa sei muviri wako?
Kudzidza ballet kunokanganisa sei muviri wako?
Kudzidza ballet kwenguva yakareba kunogona kubatsira vanhu vane hunhu hwakanaka, icho chiri zvakare chikonzero chakakomba fomu uye vanhuwo zvavo kupinda ballet. Asi zvakanakira kudzidzaballet zvinopfuura zvakanyanya shanduko muhunhu, saka kudzidzira kunobatsira sei kumuviri?
1. Kuchinja mukumira
Mamiriro ekudzidzira kudzidzisa ndechimwe chezvinhu zvakakosha zve ballet, uye icho chiri nyore kwazvo kukanganwa. Chimiro chakanaka mubhallet chinofanira kuve chakamira, asi kana ichinyatso kunzwisiswa se "musoro kumusoro uye chipfuva kunze", inozove yakajairika mamiriro ehunhu husina kunaka muvana, ndiko kuti, chimiro chemwana wedangwe kuruboshwe kwemufananidzo uri pamusoro. . Kukura kwemhasuru kwevana kunotevera, kutanga kureba kweiyo yakareba mhasuru fiber, kwozotevera hurefu hweiyo yakareba mhasuru fiber; Kura boka remhasuru kutanga, wozokura iro diki mhasurugroup.
Mwana uyo anongotanga kubata ballet nekuda kwekuti haana simba remhasuru yemudumbu, saka anogona kugara akatambanudza dumbu, zvakare kugara achiti "bako mukati". Paive nebako-mukati, kuitira kuti irambe yakatsiga yemuviri wepamusoro, uye yaifanirwa kuoneka inobhadharisa hunchback, mutsipa kumberi uye dzimwe tsika. Nekufamba kwenguva idzi dzimba dzinoshandura chimiro chemuzongoza, zvichitungamira mukusamira zvakanaka mukukura. Haugone kutarisa pasi padambudziko rekumira, chimiro ichi, chinogona kuunza psoasmuscle kupfupisa, mhasuru yemudumbu kutambanudza, kuburuka pasi kwenguva yakareba, lumbar acerbity backache yakavewo yakajairika. Imwe mhando yemwana ine imwe yekuzvarwa scoliosis, yakanyanya scoliosis inofanirwa kuenda kuchipatara kurapwa. Asi zvinyoro nyoro scoliosis inogona kugadziriswa neyakajairwa ballettraining. Izvo zvinodawo mudzidzisi we ballet kuti apatsanure kudzidziswa zvakaenzana pakati pemativi ekuruboshwe nekurudyi, uye kutarisa kuvana vane hunyoro scoliosis. Chinhu chakakosha pane mamiriro e ballet kudzidziswa kwesimba remhasuru, kunyanya musimboti.
Zvinosuruvarisa, kufurirwa nedzidziso dzechinyakare, pamwe nekuwanda kwevadzidzisi vasina hunyanzvi vachida kuchinjika, vabereki vazhinji vanoenzanisa ballet nekutsemura. Kana kungove kwakaomarara kudzidzira kuvhurwa nyoro kwemwana, zvingave zviri nani kuti learngymnastics iuye yakananga. Kudzidziswa kweBallet kunoda mhando dzemhando yepamusoro, simba uye kupfava, saka kudzidziswa kwekumira mune ye ballet yevana kwakanyanya kukosha pane kuvhura zvakapfava.
2. Shanduko yegumbo
Vanhu vanowanzo taura kuti X-o-gumbo ndiwo mubvunzo wedu wanhasi. Mukuita, zvakajairika kuve neshoma X kana O, kana musanganiswa wevaviri, kana kunyangwe chidimbu cheX negumbo rimwe uye O negumbo rimwe. Ballet inodzidzisa mhasuru, uye mapfupa achiri kukura uye kusimba kupfuura zvaari sevakuru, saka ivo vanogona kunge vachichinjwa kupfuura vakuru.
Kuti uzviise pachena, mudiki iwe, zvakanyanya kuita kuti ugadzirise chimiro chegumbo rako.Kushandisa ballet kushandura chimiro chemakumbo akanaka nemhasuru dzepakati hazvinyatso kuzivikanwa. Vanhu vasingaite ballet vane mhasuru dzepakati dzisina kusimba, kungave muzvidya kana mhuru. Kana mhasuru dzepakati dzakasimba, kunyanya muvana, chimiro chegumbo chinovandudzwa kune imwe nhanho.
3. Kuchinja nzvimbo
Ballet trainingalso inoda kuti Achilles tendon ive yakatwasuka nekuti isu tinoudza vadzidzi kukosha kweiyo arch yekuseri kwetsoka (uye zvakare arch yekutsika kwetsoka) uye kuti ndeapi masimba matatu anofanirwa kuiswa pasi petsoka. Balletstudents kunyanya vanofanirwa kukudziridza tsika yakanaka yeakarurama Achilles tendon, zvikasadaro zvinokanganisa nzvimbo yegiravhiti mukutamba. Ichi ndicho chikonzero nei kuwanda kwechikamu chevadzidzi veamateur vakanaka pachibato, asi vachitadza kubata mukati.
Ballet inoda kuve kuyerera kwenguva refu kwemvura, ndiko kushivirira kwekuchengetedza makore akavhurika kuti uone mwedzi, vabereki kana vadzidzi. Progresstakes nguva, kunyanya curve yekudzidza yemwana mumwe nemumwe haina kufanana, kumirira mwedzi mitatu kuti uone shanduko, yakakoshawo kushamisika Ndinovimba vadzidzi veballet veese saizi vanogona kuchengeta uku kuomerera.
Yapfuura:Zvakanakira kudzidza ballet
Tevere:Kupfeka sei tutu